Chrome 89 inosvika pamwe nekuvandudza mukuisirwa kwePWAs | Linux Vakapindwa muropa
Chrome 89 inosvika pamwe nekuvandudza mukuisirwa kwePWAs pakati pezvimwe zvidiki zvinozivikanwa
Pakati paNdira, uye sezvakaita Firefox, Google yakakanda iyo yazvino vhezheni yebrowser yako kutsigira Flash Player, pakati pezvimwe zvinhu zvitsva. Nhasi Kurume XNUMX yaburitsa nyowani nyowani, a Chrome 89 Ini handingataure kuti iri vhezheni ine shanduko inonakidza, asi inosanganisa chisingaenzanisike ruzivo rwakakosha, senge iyo Google Webhu Mugovana yasvika pa desktop.
Pete LePage, anga ari mutariri wekupa nhau, anoburitsa nhau nhatu nezvevamwe vese, seWebhu Serial, HID, NFC uye shanduko munzira yekuisa maPWA, asi zvakare inotaura nezve mamwe mabasa. Pazasi iwe une rondedzero nenhau dzakatanhamara, pamwe chete nevhidhiyo inosimudzira yemaminitsi mashanu.
Chrome 89 inosimbisa
Nyowani APIs, senge WebHID, WebNFC uye Web Serial.
Yakagadziridzwa rutsigiro rweAV1 encryption yeWebRTC.
Webhu Kugovana uye Webhu Kugovana Target yasvika pane desktop.
Shanduko muPWA yekumisikidza maitiro.
Iyo PWA yekuisa icon yakachinjwa.
Mamwe mashoko, mune yekuburitsa noti, inowanikwa pa Iyi link.
Isu tinorangarira izvo, kwemwedzi, Chrome iri iyo chete Chromium-based browser iyo inogona kushandisa ese maGoogle APIs uye izvo, nekuda kwechikonzero ichocho, vagadziri vazhinji vakurudzira kugadzira iyo leap kune Firefox. Imwe sarudzo ndeye kushandisa browser senge Brave iyo inopa yakafanana sarudzo, senge yayo yekuenderana.
Kuburitswa kweChannel 89 zviri pamutemo, saka yatove kurodha pasi kubva pawebhusaiti, kana nekudzvanya pano. Vashandisi veanoshanda masystem senge Ubuntu, uko iyo repository yakaiswa panguva imwechete neiyo bhurawuza, ichaona iyo nyowani pasuru seyekuvandudza munguva pfupi, kana vasati vazviona kare. Pane mamwe masisitimu anoshanda, kana semuenzaniso paArch Linux / Manjaro anogona kuiswa kubva kuAUR, iyo yekuvandudza ichazotora chinguva chidiki kuti isvike.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome 89 inosvika pamwe nekuvandudza mukuisirwa kwePWAs pakati pezvimwe zvidiki zvinozivikanwa
Iko kushandiswa kweFlutter nekumisikidza muzvishandiso zvitsva. Hutsva Ubuntu chimiro?
Nyowani yakavhurwa sosi marezinesi ekupindura kune zvitsva zvinodiwa